Saameynta COVID19 Aduunka iyadoo Dhimashada gaadhey 400,000 – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Saameynta COVID19 Aduunka iyadoo Dhimashada gaadhey 400,000
Saameynta COVID19 Aduunka iyadoo Dhimashada gaadhey 400,000
Sarkaal ayaa sheegey in la xoojinaayo kala fogaashaha bulshada iyado la furan dalxiiska iyo Hotelka Grand Palace ee magaalada Bangkok bishii Juun 7, 2020, maaddaama ay dib u fureen dalxiisayaasha. Tirada dhimashada adduunka ee coronavirus ayaa ku dhowaad 400,000 oo qof Axadii iyada oo dhimashadu ay sii kordheysay Latin America.
Tirada dhimashada adduunka ee coronavirus ayaa ku dhowaad 400,000 oo qof Axadii iyada oo dhimashadu ay sii kordheysay Latin America.
Arintaan ayaa imaaneysa iyadoo wadamada soo saaray shidaalka ay isku raaceen in la kordhiyo dhimista wax soo saarka si loo bilaabo burburin ku yimid qiimaha sababay
Dalka Braziil wuxuu hada haystaa dhimashada sadexaad ee ugu saraysa aduunka, laakiin Madaxweyne Jair Bolsonaro wuxuu ku hanjabay inuu ugaga tagi doono Ururka Caafimaadka Aduunka (WHO) “fikirka fikirka ah”, asagoo raacaya tusaalaha Mareykanka.
Wuxuu ka mid yahay kuwa ku doodaya in burburka dhaqaale ee sababaya uu ka xun yahay virus-ka laftiisa – warshadaha saliiddana si gaar ah ayaa loo soo gaadhsiiyay.
hoos u dhigista soo saarka shidaalka
OPEC waxay ogolaatay Sabtida in ay kordhiso heshiiska bisha Abriil si ay u dhinto wax soo saarka illaa bisha Luulyo, iyada oo hadafkeedu yahay in ay kobciso soo kabashada sicirka saliidda kadib markii ay hoos u dhacday dalabaadka sababay xannibaadaha fayraska.
Dowladaha ayaa sidoo kale si isa soo taraya diiradda u saaraya hagaajinta waxyeelada dhaqaale, iyo xitaa wadamada adag ee Yurubta ah ayaa hada furaya xuduudahooda una ogolaanaya dadka inay ku soo laabtaan shaqada.
Laakiin xogta murugada leh ee labada dhaqaala ee ugu waaweyn Aasiya waxay iftiimisay wadada dheer ee soo kabashada.
Shiinaha ayaa ka warbixiyay buuq ku yimid ganacsiga shisheeye gadaashiisa baahida macaamiisha ee hoos u dhacday iyo daciifnimada suuqyada muhiimka ah ee dibedda.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya hoos u dhaca qotada dheer ee dhoofinta dhoofinta ayaa hoos u dhacaya dhismaha warshadaha adduunka, halkaas oo fayrasku markii ugu horreeyay soo muuqday dhammaadkii sannadkii hore.
Warshadaha Hindiya ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay dib ugu bilaabi lahaayeen shaqo la’aanta awgeed, iyada oo waddanku si tartiib tartiib ah uga soo baxayo xidhitaan adag oo qaran oo dhan kaas oo malaayiin muhaajiriin ah oo dib u celis ah dib loogu celiyay tuulooyinkoodii hore ee fog.
Dhibaatadii caafimaad ee ugu xumayd in kabadan hal qarni ayaa ku dhawaad ​​6.9 milyan adduunka oo dhan ku qasbay tobanaan malaayiin ah inay shaqadooda kaliya ka qabtaan dalka Mareykanka, oo ah ummada dunida ugu dhibaatada badan.
Laakiin madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in waddankiisu dib u soo kabanayo.
“Waxaan haysanay dhaqaalihii ugu weynaa taariikhda adduunka. Awooddaasina waxay noo oggolaanaysaa inaan ka gudubno masiibadaas argagaxa leh, inteeda badan, waxaan u maleynayaa inaan sifiican u sameyno,” ayuu u sheegay saxaafadda.
Iyada oo uu waddanku ka noqonayo usbuucii labaad ee mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo cunsuriyadda iyo naxariisdarrada bilayska, Trump – oo wajahaya dib-u-doorashada ee Nofembar – ayaa mar kale ku celiyay wicitaankiisii ​​si loo sii wanaajiyo tallaabooyinka guriga-joogista ah.
Waxay daba socotaa tirooyin la yaab leh oo shaqaalaynta ah oo muujinaya in waddanku helay 2.5 milyan shaqo bishii Maajo.
Yurub dhexdeeda, waddamada sida xun wax u garaaceen ayaa si tartiib tartiib ah usii waday dariiqa ka dib aafada faafa si caadi ah, iyagoo sidoo kale raadinaya inay soo nooleeyaan waaxyo dalxiis oo muhiim ah waqtiga xagaaga.
Midowga Yurub wuxuu sheegay inay dib u furi karto xuduudaha dadka tahriibka ah ee ka yimid gobolka dibedda horaantii Luulyo, ka dib markii waddamada qaarkii ay dib u fureen martida Yurub.
Faransiiska gudaheeda, Farshaxanada loo yaqaan ‘Versailles’ dib ayaa loo furay iyada oo aan dalxiisayaasha Mareykanka iyo Shiinaha oo sida caadiga ah saddex meelood meel ka mid ah dadka soo booqda.
Wadanka ayaa sidoo kale xusayay sanadguurada sanadguuradii 1944-kii ee D-Day iyadoo ay tiro yar oo ka mid ah dadweynihii waaweynaa ee la arkaayay sanadihii hore, ay sabab u ahayd xayiraad xagga jahawareerka bulshada ah.
Dhanka kale, golf-ka Asia ee loo yaqaan ‘golf’s Asia Tour’ wuxuu noqday ururkii ugu dambeeyay ee caalami ah ee ku dhawaaqa qorshayaasha dib u bilaabaya, kadib markii aafadu ku dhacday jadwalka ciyaaraha adduunka jahwareerka.
Ciyaarta ayaa la rajaynayaa inay dib u bilaabato bisha Sebtember, in kasta oo qabanqaabiyeyaashu sheegeen in xayiraadda xayiraadaha duullimaadka ay ku qasbi karto kuwa kula tartamaya inay safraan iyada oo aan la helin shaqaale taageero.
Calaamadaha muujinaya in noloshu ay si caadi ah ugu soo noqonaysay qaaradaha Yurub iyo Aasiya waxaa xanaaqay tirada dadka qulqulaya ee ka imanaya Latin America.
Tirada dhimashada ee Brazil ayaa gaartay 35,000 iyada oo Bolsonaro uu dhaleeceeyay hay’adda caafimaadka adduunka ee Trump isaga oo sheegay in Mareykanku uu difaaci doono ururka maadama ay aad ugu dhowdahay Shiinaha.
Hogaamiyaha midig ayaa u sheegay saxafiyiinta.
Tolls ayaa sidoo kale si aad ah sare ugu kacaya Mexico, Peru iyo Ecuador, halka Chile, dhimashada ayaa kor u kacday in ka badan 50 boqolkiiba usbuucii la soo dhaafay.